WowOW Gooseneck किलको नल पुल आउट स्प्रेयरको साथ
घर / भान्साको नल / किचनको नलहरू तान्नुहोस् / WooOW Gooseneck किचनको नल पुल आउट स्प्रेयरको साथ
2311701 स्थापना निर्देशन
पुल डाउन स्प्रेयर संग Gooseneck भान्साको नल
तपाईको भान्साकोठा तपाईको गर्व हो र तपाई डिजाइन र कार्यक्षमताको अधिकतम संयोजन चाहानुहुन्छ। आजकल तपाईं असंख्य डिजाइनहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको सपनाको भान्छाको शैली बनाउन। तपाईको हातमा रहेका सबै विकल्पहरूबाट छनौट गर्न यो चुनौती पनि हुन सक्छ। केवल सबै भान्साका उपकरणहरू सबै प्रकारका आकृतिहरू र आकारहरूमा आउँदैनन्, तर तपाईंले किचन नलका विभिन्न विकल्पहरूको प्रभावलाई पनि हल्कासित लिनु हुँदैन। किन्च faucets कुनै पनि भान्सा मा एक प्राकृतिक केन्द्र बिन्दु हो। यसको अलावा, भान्साको नल तपाईंको भान्छाको सबैभन्दा प्रयोग हुने उपकरणहरू हुन्। जब तपाईं खाना तयार गर्न तपाईंको भान्साको नल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको भाँडा माझ्नुहुन्छ, र आफ्ना हातहरू पखाल्नुहुन्छ, तपाईं दिनको धेरै चोटि यो भान्साको चीज प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले इष्टतम किचनको नल छनौट गर्न केहि थप समय खर्च गर्नुभयो।
भान्साको नल विभिन्न शैली र प्रकार्यहरूमा आउँदछन् जुन सबै प्रकारको मागहरूको लागि फिट हुन्छ। यसको अलावा, किचेन् faucets विभिन्न र colors्ग, आकार, र प्रकारहरूमा आउँछ। मुख्य प्रकारको भान्साको फ्याचहरू पुल-डाउन किन्च faucets, पुल-आउट किन्च faucets, र उच्च चापको किन्च faucets हो। यी उच्च चापको भान्छाको नलहरू पनि gooseneck किन्च faucets नाम छ। Gooseneck किन्च faucets को मुख्य फाइदा यो हो कि तिनीहरूले कुनै पनि भान्छामा बढी कार्यक्षेत्र प्रदान गर्दछ। लम्बा gooseneck रसोई faucets तपाइँ तपाइँको भान्सा सिंक को लागी इष्टतम पहुँच प्रदान गर्दछ। यस तरिकाले तपाईलाई कुनै ठूलो समस्या आउँदैन, ठूला चीजहरू वा ठूलो भाँडो वा पन जस्ता तपाईको भान्साको सिink्कमा, र तपाईको उच्च चाप gooseneck किचन नलको मुनि।
राम्रा डिजाइन gooseneck रसोईको नल
WOWOW का डिजाइनरहरूले तपाईंलाई एक उत्तम डिजाइन gooseneck किचन नल प्रदान गर्न को लागी सबै को लागी समर्पित छन् कि राम्रो अनुकूलता पनि प्रदान गर्दछ। यसको पातलो डिजाइनको कारण, WOWOW को gooseneck रसोईको नलले तपाईंलाई मद्दतको साथ आफ्नो भान्साकोठा समाप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो उच्च चापको भान्साको नलले पनी कुनै पनि भान्सा डिजाइनमा एक उत्थान दिनेछ। सबै भन्दा माथि, यसले यसको एकीकृत पुल-डाउन स्प्रेयरको साथ उत्कृष्ट कार्यक्षमता पनि राख्दछ।
यस ब्रश निकल गोजेनक किचनको नल, जसलाई हंस-नेक रसोईको नल पनि भनिन्छ, समकालीन र कालातीत तत्वहरूको साथ एक औद्योगिक लुक प्रदान गर्दछ। WOWOW को gooseneck भान्साको नल कुनै डिजाइनर पत्रिकामा विशेष डिजाइन किचेनको सुविधा हुने ठाउँ बाहिर हुने छैन। कुनै चीजको लागि होईन, यो gooseneck किचनको नल WOWOW को शीर्ष भान्छा faucets मध्ये एक हो र यो विश्वव्यापी रसोईको नल आपूर्तिकर्ता को गर्व।
बहु-कार्यात्मक gooseneck रसोईको नल
डिजाईन बाहेक, WOWOW को यो gooseneck किचनको नल एक बहुआयामी नल हो जसले दुई स्प्रेयर विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ। केवल यस उच्च चापको भान्साको नलले बर्तनहरू र प्यानहरू भर्न नियमित स्ट्रीम प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, यो एक राम्रो सफाई मोड प्रस्ताव गर्न सजिलै तपाइँको भाँडा माझ्न र भान्छा सिन्क कुल्ला गर्न एक आरामदायक स्प्रे मोड सुविधा। तपाईं नल नोजलमा बटनको साथ दुई विकल्पहरू बीच सजिलैसँग स्विच गर्न सक्नुहुनेछ। यसले एकल हातले विकल्पहरू स्विच गर्न सम्भव बनाउँदछ जब तपाईं पल्किँदै हुनुहुन्छ। प्रकार्यहरू स्विच गर्दा कुनै पनि स्प्लासि and र सहजता तपाईले कसरी स्विच गर्न सक्नुहुन्छ बटन स्विच गर्न सक्दैन।
यो gooseneck भान्साको नल एक 60 इंच पुल-आउट नलीको साथ आउँदछ जुन सजिलै निकाल्ने प्रस्ताव गर्दछ, किनकि नलको सिलिकन जेल नोजलको कारण। यस नलीको साथ, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो भान्साको सिinkक वरिपरि सबै गाह्रो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ। र सबै भन्दा माथि, लचिलो कुंडा एडाप्टर अधिकतम आराम प्रदान गर्न सजीलो पिभोट गर्न सक्षम गर्दछ। यस सफा गर्ने किचनको नलको सजिलो मोडले तपाईंलाई सफा गरिसके पछि नलको नोजल जहिले पनि यसको मूल अवस्थामा फर्काउँछ। कुनै समस्या बिना!
उत्कृष्ट गुणको साथ Gooseneck रसोईको नल
गूसेनक किचनको नलले तपाईंलाई गुणस्तर प्रदान गर्दछ र तपाईंले नोटिस गर्नुभयो कि यस नवीन उच्च चापको भान्छाको नलको प्रत्येक पक्षमा। यो gooseneck किचन नलको वजन o० औंस भन्दा बढि छ, त्यसैले तपाईंले तुरुन्तै याद गर्नुभयो कि तपाईंसँग एउटा ठोस धातु उत्पादन रहेको छ। WOWOW काँसा-कोर gooseneck नल एक उत्कृष्ट निकल फिनिश छ, र सबै जोर्नीहरू उच्च गुणवत्ता सामग्री संग कडा बन्द गरिएको छ। यो तपाइँलाई एक ग्यारेन्टी ड्रिप मुक्त र चुहावट मुक्त नल अनुभव प्रदान गर्दछ। गुणस्तरको साथसाथै, WooOW को यो gooseneck भान्सा नल पनि स्थापित गर्न सजिलो छ। WOWOW को उच्च चापको भान्साको नललाई केवल १, २ वा--होलको भान्छा सेटअप र, चिसो र तातो पानी पाइपहरू चाहिन्छ। दुबै १, २, वा--होलको भान्सा सेटअपको लागि समावेश गरिएको धातु एसकुचियोनले यस गोजेनक किचनको नललाई कुनै पनि प्रकारको किचन सेटअपसँग उपयुक्त बनाउँदछ। यसले विभिन्न प्रकारका सि sinहरूसँग मेल खान्छ र तपाइँले कुरूप अन्तरहरू वा प्वालहरू क्षतिपूर्ति दिन संघर्ष गर्नुपर्दैन। WOWOW ले तपाईंलाई अवयवहरूको स्थापनाको पूरा सेट प्रदान गर्दछ।
उचित मूल्यको gooseneck किचनको नल
WOWOW को gooseneck भान्साको नल को गुण निर्विवाद छ, यो उच्च चाप भान्सा को नल को मूल्य गुणस्तर अनुपात सबैभन्दा राम्रो तपाइँ बजार मा पाउनुहुनेछ। किनभने WOWOW मात्र अत्यधिक स्वचालित प्रक्रियाहरु संग नवीन उत्पादन प्रविधिहरु को उपयोग गर्दछ, हामी एक अत्यधिक सस्तो मूल्य मा यो gooseneck भान्छा नल को पेशकश गर्न सक्नुहुन्छ। एक भान्साको नल प्राय अन्तिम वस्तु हो कि एक नयाँ डिजाइन भान्छा को लागी किनेको छ। यसैले भान्साको नल प्राय: समग्र भान्सा बजेट को बन्द प्रविष्टि हो, जहाँ यस बजेट को सीमाहरु पहिले नै पहिले नै सम्पर्क गरीएको छ वा पुग्यो। तेसैले यो जान्न को लागी राम्रो छ कि तपाइँ अझै पनी एक सीमित बजेट मा एक उच्च गुणवत्ता को भान्छा को नल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो gooseneck रसोईको नल तपाईंलाई नि: शुल्क पठाइन्छ, ताकि तपाईं कुनै पनि अतिरिक्त लागतहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईले देख्नु भएको कुरा तपाईलाई के हो, र त्यो हाम्रो मूल्यको लागि पनि लागु हुन्छ। WOWOW मा हामी हाम्रा ग्राहकहरूको बारेमा ख्याल राख्छौं र तपाईंलाई न्यूनतम सम्भावित मूल्यमा शीर्ष-पायदानको किचन डिजाईनको संभावना प्रदान गर्न चाहन्छौं।
हामी भरोसा गर्छौं कि एक gooseneck भान्सा नल!
WOWOW ले यसको उत्पादनहरूमा विश्वास गर्दछ र त्यसैले हामी तपाईंलाईaबर्षे वारंटी अवधि प्रस्ताव गर्न डराउँदैनौं। यसका साथै हामी तपाईंलाई ग्राहक सेवाको उच्च स्तर प्रदान गर्दछौं। हामी सँधै तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन उपलब्ध छौं, जबकि gooseneck किलको नल स्थापना गरेको बेला पनि। कुनै कुराको लागि होईन जुन तपाईं हामीलाई5०-दिनको मानार्थ फिर्ती-नीति द्वारा आश्वस्त हुनुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कुनै पनि कारणले उत्पादन मनपर्दैन भने, हामी तपाईंलाई सोधेका प्रश्नहरू फिर्ता फिर्ता गर्नेछौं। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, WOWOW मा हामी हाम्रा उत्पादनहरूलाई विश्वास गर्छौं!
संक्षेपमा gooseneck भान्साको नलको फाइदा:
अद्वितीय स्टाइलिश डिजाइन
एकीकृत पुल-आउट नोजल
दुई स्प्रे समारोह
उच्च प्रदर्शन संग शैली जोड्दछ
उच्च गुणस्तरीय पीतल सामाग्री बनेको छ
SKU: १2311701००।। विभाग: किचनको नलहरू तान्नुहोस्, भान्साको नल टैग: ब्रश निकल, तल तान्नु, स्प्रे
भान्छा / इन्डोर / वाणिज्यिक / भोजनालय